२८ फाल्गुन २०७३
काठमाडौं शहर अहिले पूरै धूलोले ढाकिएको छ । जता हे¥यो त्यतै धुलो । मेलम्चीको पाइपले पानी मात्रै ल्याउँछ भनेको त धुलो पनि ल्याउने रहेछ । पानी कहिले निस्किने हो अझै थाहा छैन । तैपनि धूलो निस्किएपछि एक न एक दिन पानी पनि पक्कै निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ । धुलोले गर्दा काठमाडौंमा मास्क नलगाई हिँड्न मुस्किल छ । बच्चादेखि बूढासम्म जम्मै मास्क लगाएर हिँडिरहेको देखिन्छ ।… विस्तृत समाचार
३३ किलो सुन काण्डको दोस्रो पार्ट पनि सार्वजनिक भएको छ । सुन ल्याउने काममा जति पनि मानिसको संलग्नता थियो, ती सबैको नाम सार्वजनिक भयो । अब सुन कसले ल्यायो, किन ल्यायो भन्ने प्रश्नै रहेन । सबै खुलस्त भयो । सबैभन्दा अनौठो त के भयो भने उक्त काण्डमा संलग्न धेरै मानिसमध्ये केहीचाहिँ प्रहरी पनि रहेछन् । एकजना त उच्च पदका एसएसपी पनि । यति ठूलो सुन… विस्तृत समाचार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अस्ति रोल्पा जानुभएछ । धेरैपछि उहाँ रोल्पाबाट प्रचण्ड भएर काठमाडौं छिर्नुभएको हो । अस्ति काठमाडौंबाट पुष्पकमल दाहाल भएर रोल्पा जानुभयो । रोल्पा बस्दा सधैँ परिवर्तनको कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो । जे होस्, यतिचाहिँ परिवर्तन भएछ । बाँकी परिवर्तन पछि हुँदै जाला । रोल्पा पुग्दा उहाँ साह्रै भावुक बन्नुभयो । त्यसो त भावुक बन्नु पनि अहिले उहाँको नियमित कार्यक्रमजस्तै भइसकेको छ । भावुक बन्दै भन्नुभयो,… विस्तृत समाचार
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा अर्कैलाई नियुक्त गरेपछि पूरा फोर्समै असन्तुष्टि फैलिएको छ । वरियता क्रममा जो एक नम्बर छ उसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने । तर, सरकारले तीन नम्बरलाई गरिदियो । एकलाई छाडेर दुईलाई मात्रै नियुक्त गरेको भए पनि यति विवाद हुने थिएन । तर, एकदमै तल झरेर तीनमा लगेकाले ठूलै विवाद उत्पन्न भइदियो । सुनिन्छ, सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि एक जना खास नेताजीको हात छ… विस्तृत समाचार
सरकारले चुनावको घोषणा र राजदूतको घोषणा एकै दिन गरेछ । अब चुनाव भन्या त उही हो । भयो भने भोट हाल्ने हो, भएन भने नहाल्ने हो । तर, राजदूत घोषणाचाहिँ अचम्मै भएछ । हामी मात्र होइन, राजदूत नियुक्त भएका मानिसको अनुहार देख्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैं पनि अचम्म पर्नुभयो होला । तर, अचम्म मानेर के गर्नु । राजदूतका लागि भुक्तानी आइसकेपछि त जसले ख्वाए पनि खानु… विस्तृत समाचार
सरकारले गरेको अर्को एउटा नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्चले रोकेको हो । यसअघि अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति रोकेको थियो । यो त अनौठै भयो । सरकार नियुक्त गर्दै जाने, सर्वोच्च खारेज गर्दै जाने । यस्तो भएपछि देश कसरी चल्छ हँ ? देश चलाउन धेरै निकाय खोलिएका छन् । ती सबैमा प्रमुख पनि हुन्छन् ।… विस्तृत समाचार
भारतमा बाबा रामदेवले घर–घरमा पतञ्जलि सामग्री पु¥याइरहेकै बेला यता नेपालमा चाहिँ ‘बाबु रामदेव’ले घर–घरमा नयाँ शक्ति पु¥याउने अभियान थालेका छन् । भारतमा बाबा रामदेव । नेपालमा बाबु रामदेव ! अहिले भारतमा मात्र होइन, नेपालमै पनि घर–घरमा बाबा रामदेवका सामान पुगिरहेका छन् । साबुन, टुथपेस्ट, ब्रस, मसला, पाचक, बिस्कुट, चाउचाउ...आदि आदि । सायद भारतमा बाबा रामदेवको लोकप्रियता देखेर होला, नेपालमा बाबु रामदेवले पनि त्यही तरिका अपनाएको… विस्तृत समाचार
सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दको नियुक्ति रोकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पो आपत परेछ । मानिस आरोप लगाइरहेका छन् कि उनकै दबाबमा सरकारले चन्दलाई आइजी बनाएको हो । तर, सर्वोच्चले रोकिदियो । यथार्थमा साँच्चै आपत हुनुपर्ने त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हो । किनभने उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउनुभएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोकिदिनुभयो । अहिले नवराज सिलवाल या प्रकाश… विस्तृत समाचार
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि पुस्तक निस्कियो । नाम हो– म प्रधानमन्त्री हुँदा । अर्थात् उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा । आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयलाई चिरस्मरणीय बनाउने उद्देश्यले पनि यो पुस्तक आएको हुनुपर्छ । किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको समय वास्तवमै स्मरणीय छ । अझ चिरस्मरणीय भन्दा पनि फरक नपर्ला । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको त्यो क्षण सायद उहाँलाई पनि सम्झना छैन होला, मलाई पूरा सम्झना छ ।… विस्तृत समाचार
केही दिनदेखि शहरमा एउटा विज्ञापनको चर्चा छ । नांगो साबुनसम्बन्धी । नांगो साबुनबारे जनचेतना जगाउन उक्त विज्ञापन प्रकाशन भएको रहेछ । तर, धेरैको टिप्पणी छ, नांगो साबुन जति नांगो हुन्छ, त्यो विज्ञापन त्योभन्दा पनि नांगो रहेछ ! अर्थात् नांगो साबुनबारे नांगो विज्ञापन ! विवाद बढेपछि सम्बन्धित निकाय जाग्यो । व्यापारी व्यवसायी पनि उठे । सबै जना उठेपछि नांगो साबुनसम्बन्धी विज्ञापनलाई नै नंग्याउने काम भयो ।… विस्तृत समाचार